Sharia Law | မျိုးမြန်မာ
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	Tagged: Sharia law.	Leaveacomment
Democracy VS Islamic Sharia Law
ဒီမိုကရေစီ အရ လူတိုင်းလူတိုင်း ဟာ အခွင့်အရေးအားလုံးတူရပါ့မယ်။ ဒါကြောင့် အစ်ဆလာမ် ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိကရန်သူပါပဲ။
Sharia ရှီးယား ဥပဒေအရ မွတ်ဆလင်တွေဟာ လူတွေထဲမှာ အကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။ မွတ်ဆလင် တွေဟာ မွတ်ဆလင် မဟုတ်တဲ့လူတွေထက် အဘက်ဘက် က ပိုမို ကြီး မြတ်တယ်။ ပိုမို အခွင့် အရေးရပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင် ပါဘူး၊ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ 1st Class ပါ၊ အစ္စလာမ် တရားဥပဒေအရ ကို ကပေါ်တင် အခွင့်အရေးပေးထားတာပါ။ အစ္စလာမ် မဟုတ်တဲ့လူတွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ အောက် က 2nd Class လူတန်းစာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Human Rights VS Islamic Sharia Law
ံHuman rights အရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လွပ်လပ်စွာကိုးကွယ် ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မွတ်ဆလင် Sharia Law မှာတော့ မွတ်ဆလင် တစ်ယောက်ဟာ တစ်ခြားဘာသာ ကူးပြောင်းရင် မွတ်ဆလင် ဥပဒေအရ တရားဝင်သေဒဏ် ပေးပါတယ်။ ဒါဟာ Human Rights နဲ့Religious Rights ကို ပေါ်တင်ကြီး စော်ကား တာပါ။
လူ့ အခွင့်အရေး ကြေညာ စာတမ်းအရ လူတိုင်းလူတိုင်း ဟာ အခွင့်အရေးအတူတူ ရရပါ့မယ်။ ယော်ကျာ်းမိန်းမ မရွေးပါ။ လိင်ခွဲခြား ခြင်း ၊ မိန်းမများကို ဖိနှိပ်ခြင်းလုံးဝမရှိ ရပါဘူး။ Sex-Discrimination မရှိရပါဘူ။
ဒီနေရာမှာလည်း အစ္စလာမ် ဟာ လူ့ အခွင့် အရေး ကြေညာ စာတမ်းရဲ့ အဓိက ရန်သူ ဖြစ်နေပါတယ်။
အစ္စလာမ် မှာ မိန်း မများ ဟာ ယောကျာ်များထက် ယုတ်ညံ့တယ် လို အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မိန်းမများ ဟာ တိရိတ်ဆန်နဲ့ တူတယ်၊ မကောင်းဆိုးဝါ့းနဲ့ တူတယ်၊ အနာရောဂါတစ်ခု လို ရွံစရာကောင်းတယ် စသည်ဖြင့် အစ္စလာမ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
မွတ်ဆလင် ယောကျာ်း များဟာ အရှင် သခင် ၊ မိန်းမ များ ဟာ ယောကျာ်း များအောက် မှာ ခေါင်းမြီးခြုံနေရတယ်။
မွတ်ဆလင်ယောကျာ်း များဟာ တရားဝင်မိန်းမ ၄ ယောက် ယူခွင့် ရှိတဲ့ အပြင် မိန်းမများ ကို ရိုးအီလာရင် ချက်ချင်း ကွာရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိန်မများ ကတော့ သူတို့ ကို နှိပ်စက်တဲ့ မွတ်ဆလင် ယောကျာ်း တွေကို ကွာရှင်းချင် ပေမဲ့( ယောကျာ်း က ကွာရှင်းမပေးမချင်း) ဘယ်လို မှ ကွာရှင်းလို့ မရပါဘူး။
ဒါ့အပြင့် လူ့ အခွင့် အရေး ဥပဒေ မှာ လင်မယား မုဒိန်းမှု ဆိုတာရှိပါတယ်။ မိမိမယား ပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း မိန်းမ စိတ်မပါတဲ့ အချိန် မှာ Force-Intercourse လုပ် ရင် လင်မယား မုဒိန်းမှု မြောက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစ်ဆလာမ် ကိုရမ်ကျမ်း မှာ မိမိ မယားတွေ အားလုံး ကို မွတ်ဆလင် ကောင်တွေက
ကြိုက်တဲ့ အချိန် မှာ လုပ် ခွင့်ရှိပါတယ်။
စိတ်မပါ ငြင်းဆန်တဲ့မိန်းမမှန် သမျှကို မွတ်ဆလင် ကောင်တွေ အစ္စလာမ် ကိုရမ် တရားဝင် ဥပဒေ အရ ပါးနား ရိုက် ခွင့် ၊ နှိပ်စက်ခွင့် ရှိပါတယ်။
အစ္စလာမ် ကိုရမ် တရားဝင် ဥပဒေ အရ ဘယ်လို မှ ရာ ဇ၀တ်မှု မရောက်ပါဘူး။
မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ ခေါင်းမြီးခြုံမပါပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုံလုံ ခြုံခြုံ ၀တ်ဆင်ပြီးအပြင် ထွက်ရင်တောင် အဲဒီ မိန်းမဟာ ခေါင်းမြီးခြုံမပါပဲတဲ့အတွက် မုဒိန်းကျင့် ခံချင် လို့ ဆိုပြီး ခေါင်းခြုံမပါတဲ့ မိန်းမတွေ ကို မုဒိန်းကျင့် လို့ ရပါတယ်တဲ့။
ဒါ့အပြင် မိန်း ကလေးတစ်ယာက် က ဖေါက်ပြန်တယ်၊ ပွေတယ် လို့ ယူဆရင် အဲဒီမိန်း မကို မသေမချင်း ကျောက် တုံး ကြီးတွေ နဲ့ဦးခေါင်းကို စိစိညက်ညက် ကြေတဲ့ အထိ ပေါက် သတ်ခိုင်းတာ ဟာ Islamic Sharia Law ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ဘယ်လို မှ မဖြစ်သင့် တဲ့ အစ္စလာမ်ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ အပြုအမူ တွေ ပါ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ Qur’an ကျမ်း ကဆင်းသက်လာပြီး အဲဒီကျမ်းချက်တွေ ဟာ Very Basic အစ္စလာမ်ရဲ့ အရမ်းကို အခြေခံကျတဲ့ ကျောရိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် Islam ဟာ Reform လုပ် ဖို့ ဘယ်လို မှမဖြစ်နိုင် ပါဘူး။
အဲဒီ ရက်စက်ယုတ်ညံ့တဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းချက်တွေ ဟာ အာလာဘုရား က ဒီလို မိန်းမတွေကို ဗျင်းခိုင်းတာ ၊ လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကြောင့် Islam ဟာ Reform လုပ် ဖို့ ဘယ်လို မှမဖြစ်နိုင် ပါဘူး။
အဲဒီ ရက်စက်ယုတ်ညံ့တဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းချက်တွေ ဟာ နှုတ်လိုက် ရင်လည်း အစ္စလာမ်ဟာ ဘာမှမကျန်တော့ပါဘူး။
Child Rights VS Sharia Law
ကလေးသူငယ် အခွင့် အရေး အရ ၊ လူ့ အခွင့် အရေးအရ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေး တဲ့ မိန်း ကလေးကို Sex Abuse လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်လို့မရပါဘူး။ မုဒိန်းမှု ပါ။ ထောင်ကျပါတယ်။ Pedophile, Rapist ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစ်ဆလာမ်မှာ ကလေး သေးသေး လေးတွေ က စပြီး ( ၅နှစ် ၆နှစ် ၇နှစ် အရွယ်လေးတွေကို )မွတ်ဆလင်ကြီးတွေ က မယားအဖြစ်ယူနေကြပါတယ်။
အစ်ဆလာမ်ဥပဒေကိုရမ် ကျမ်းကို က တရားဝင် ပေးယူတာပါ ။
မွတ်ဆလင် ကလေးသူငယ် မိန်းကလေးများမှာ ကယ်မဲ့သူ မရှိပါဘူး။ အင်မတန်မှ ရက်ရက်စက်စက် Abuse လုပ်ခံရပါတယ်။
အဲဒီ ၅နှစ် ၆နှစ် ၇နှစ် အရွယ် မိန်း ကလေး တွေကို အစ်ဆလာမ် ကိုရမ် တရားဝင် ဥပဒေ အရ Intercourse လုပ်နိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
တဏှာရူး၊ မုဒိန်းကောင် မိုဟာမက် ( မွတ်ဆလင်တွေ အခေါ် )တမန်တော် မြတ်ကြီး တောင် ဒီလို ၆နှစ် အရွယ် ကလေးကို ယူပြီး ဂ နှစ် လောက် မှာ စားပစ်သေးတာပါ။
ငါတို့ တမန်တော်ကြီးလုပ်သမျှ ဟာ မြင့်မြတ်တယ် ဆိုပြီး အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
မွတ်ဆလင်မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ ဘ၀ဟာ ငရဲကျတာထက်ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ် မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ သေခါနီးအဖိုးကြီးတွေကို အသက် ၆နှစ်လောက်မှာ အတင်းအကျပ် ယူလိုက် ရတယ်။
မိန်းမ များစွာနဲ့ဘုံ လင်တစ်ယောက် ကို Share လုပ်ပြီး နေရတယ်။
သေတဲ့အထိ အိမ်တွင်းပုန်းနေရတယ်။ ပညာမသင်ရဘူး။
လင်က ဘယ်လောက် နှိပ်စက်စက် ၊ အစ်ဆလာမ်ဥပဒေအရတိုင်လို့ မရဘူး။
လင်က ပေးမကွာမချင်းသေသည်အထိ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာ နေရတယ်။
ဒီကြားထဲ ဖေါက်ပြန်တယ်လို့ သံသယရှိရင် ဖေါက်ပြန်တဲ့မိန်းမဆိုပြီး အဲဒီမိန်း မကို မသေမချင်း ကျောက် တုံး ကြီးတွေ နဲ့ဦးခေါင်းကို စိစိညက်ညက် ကြေတဲ့ အထိ ပေါက် သတ် တာခံရမယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ရဲ့ အခြေခံအစ္စလာမ်ဟာ လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် အဓိကရန်သူဖြစ်နေပါတယ်။
Religious Rights VS Sharia Law
human rights အရ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မနှောင့်ယှက်ရပါဘူး။
ဘာသာမတူ ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့လူတစ်ယောက် ကို သတ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ တခြားသောဘာသာတွေအထွတ် အမြတ်ထားတဲ့နေရာတွေ ကိုမဖျက်ဆီးရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အစ္စလာမ်ရဲ့ အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းမှာ တစ်ကမ္ဘာ လုံး အစ္စလာမ် ဖြစ်အောင်လုပ် ရမယ်။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေ အားလုံး ဟာ Enemies of Allah အာလာရဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် သတ်ပစ်ရမယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ဖိနှိပ်ထားရမယ်။ Suppress လုပ်ထားရမယ် စသည် ဖြင့် Non-Sense များ။ အကြမ်ဖက်ဖို့ အားပေးတဲ့ Violent Verses တွေ နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အတွက် လူ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆန့် ကျင်နေပါတယ်။
ရာဇ၀င်မှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ သူများဘာသာတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာ။ ယနေ့ အထိလည်း တခြားဘာသာတွေကို ဖိနှပ်တာတွေဟာ အဲဒီ အစ္စလာမ်ကိုရမ် ကျမ်း ရဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေပါ။
အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဟာ အသီးအပွင့် တွေပါ။ ဇစ်မြစ်က Islam ပါ။
Terrorism is the Fruit, Islam is the Main Root. As long as the Root( Islam ) Survive, It will produce much more Fruits ( Terrorists). And the World will be burned by Jihad Flames.
human rights အရ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် နိုင်ငံတိုင်ဒေသတိုင်းမှာရှိရပါ့မယ်။
သူများ နိုင်ငံတွေ မှာ ဗလီတွေလိုက်ဆောက်ပြီး၊ သူများဘာသာတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေရာတွေမှာ ဗလီကြီးတွေဆောက် ပြီး မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ မက်ကာ မှာတော့ တခြားဘာသာဝင် တွေပေးမ၀င်တာ၊
အစ္စလာမ် ဘာသာ ရဲ့ အထွတ်အမြတ် ဆော်ဒီတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တခြားဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေကို ပေးမဆောက်တာဟာ Suppression of all other religions ဖြစ်တဲ့အတွက် လူ့ အခွင့်အရေး ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးကို ဗျင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူများ နိုင်ငံတွေ ကတောင် သူ တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ဗလီဆောက်ခွင့် ပေးတဲ့ အတွက် ဆော်ဒီမှာရှိတဲ့ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ကျတော့ မွတ်ဆလင်တွေက ဘာသာရေးဖိနှိပ်ထားတာဟာ လူ့ အခွင့် အရေး ကို တိုက်ရိုက် စော်ကားတာပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့အစ္စလာမ်ရှီးယား ဥပဒေဟာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့် ကျင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ အားလုံးမြတ်နိုးတဲ့ ၊ လူ့ အခွင့်အရေး ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ယောကျာ်းမိန်းမ သာတူညီမျှဖြစ်မှု Human Rights ၊ လွတ်လပ်ခွင့်Liberty ၊ Freedom of Action ဒါတွေအားလုံးကို အစ်ဆလာမ် ဟာဖိနှိပ်ထားပါတယ်။
ဒီတော့ကာ အစ္စလာမ်ဟာ လူ့ အခွင့် အရေး၊ ဒီမိုကရေစီသဘောထားကို ပေါ်တင်ကြီး ဖိနှိပ် ထားတဲ့အတွက် ဒီမို ကရေစီနဲ့ဖြောင့် ဖြောင်ြ့ကီးဆန့် ကျင်နေပါတယ်။
အခု ဥရောပက နှစ်ပေါင်းများစွာ သာတူညီမျှ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးလဲာ့တဲ့ အင်္ဂလန် နဲ့ ပြင်သစ် တို့ မှာ မွတ်ဆလင်တွေက လူပါးဝပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီမိုကရေစီ Human rights ကို ဘေးဖယ်ထားပြီး Sharia အစ္စလာမ်ဥပဒေနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့တောင်းဆို ထားပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ ဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွ အများစု ဖြစ်လာတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ Sharia Law နဲ့အုပ်ချုပ်နေပါပြီ။
ဆိုလိုတာက ပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါလျက် ၊ ပြင်သစ် ဒီမိုကရေစီ တရားဥပဒေ မတိုးပေါက်တဲ့ ဒေသတွေဖြစ်နေပါပြီ။
ခိုးရင် ဒီမိုကရေစီဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်သာ အလွန်ဆုံးကျခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Sharia အစ္စလာမ် ဥပဒေ အရ အဲဒီခိုးတဲ့လက်ကို ရက်ရက်စက်စက်ဖြတ်ပစ်ပါ့မယ်။
Human rights အရ Gays အခြောက်များ ဟာ သူ့ တို့ သဘာဝအလျောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Sharia Law အရ Gays အခြောက်များ ကို သေဒဏ် ပေးပါတယ်။
မိန်းမ များကို ပွေတယ်လို့ ယူဆရင် ကျောက်တုံးနဲ့ မသေမချင်း ပေါက်သတ်ပါတယ်။ အဲဒါ Sharia ဥပဒေပါ။
← မင်းက ကိုယ့်မိန်းမ
အစွန်းရောက် မူဆလင်ဆိုတာဘာလဲ ၊ မူဆလင် ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ →